Circa 1860s ilitye lasekhaya. Amagumbi okulala amakhulu amabini aneengcango zaseFransi ukuya kwiiveranda ezibanzi ezibonelela ngembono yomhlaba weefama kunye neentaba. Imizuzu emihlanu ukusuka kwiivenkile zekofu eRylstone, iivenkile zokutyela, iivenkile zakudala, ii-pubs, iiwineries kunye neendawo zomnquma.
Ukuba yindalo yoyilo lwe-1860s ikhaya libekwe njengezakhiwo ezibini ezinamagumbi okulala asemthethweni kwindawo enye kunye ne-rustic evezwe ngamatye kwindawo yokuhlala kunye nekhitshi eyahlulwe yindlela yomoya yaseTuscan. Igumbi lokuhlambela eliphambili elinebhafu yeclawfoot livula kwindlela yokubethwa ngumoya. ICamphill ineegadi ezimiselwe kakuhle ezineerozi ezindala kunye nemithi yeediliya ezirhuqa izithuba kwiiveranda ezinelanga ezibanzi ezisindleka iimbono zeepaddocks, ishedi yakudala yengcibi kunye neentaba ezingaphaya. Nantsi imvakalelo yendawo kunye nexesha. Le ndawo ineehektare ezininzi "zehlathi" elinama-wallabies, ii-wombats kunye nezinye iimarsupials ezihlala ngemvisiswano nabantu.
Ukuba ngamatye indlu iyaphola ehlotyeni kwaye ifudunyezwe ngumlilo weenkuni ebusika. Ubomi beentaka kule ndawo ngokuqinisekileyo luphawu kunye nezikhwenene zokumkani zindwendwela rhoqo ngorhatya. Ukunyuka kwangoko kuya konwatyiswa ziintaka kunye nee-wrens kwiifestile zasekhitshini.
Ukuba ujonge ubuncinci bale mihla obunemiphezulu ecwebezelayo kunye nemigca ecocekileyo engenambali, ngoko uya kuphoxeka - kodwa ukuba incasa yakho, njengoko yeyam ngohlobo, ukuthungwa kunye nembali ebekwe kwindawo ephefumla kunye nexesha, ke oku yona.
Le ndawo asiyiyo eyeePaki zeSizwe zalapha, izidiliya, amagcume omnquma. Kukwakho nendlela yomhlaba ekufutshane yokukhwela iibhayisekile. Indlu ijonge ama-paddocks anamahashe afika ngovuyo ecingweni ukuze afumane ii-apile, iminqathe kunye neepats. Ukukhwela ihashe akubonelelwa ngeendwendwe eCamphill njengoko imfuno ayichazi iindleko ezingaqhelekanga ze-Inshorensi ezibandakanyekayo.
Ndikwipropathi kwaye ndikufutshane ukuba kuyimfuneko, kodwa ukude ngokwaneleyo ukuqinisekisa ubumfihlo.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-8516
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Camboon